नयाँ मन्त्रीले लिए सपथ : को बाहिरिए, को यथावत र को नयाँ मन्त्री ? (हेर्नुहोस् नामसहित) - HongKong Khabar
नयाँ मन्त्रीले लिए सपथ : को बाहिरिए, को यथावत र को नयाँ मन्त्री ? (हेर्नुहोस् नामसहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: २३:४२:३३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा पुनर्गठिन मन्त्रिपरिषदका ३ उपउप्रधानमन्त्रीसहित सबै नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासमा आज शुक्रबार साँझ ८ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराएकी हुन् । एमालेका दुई जना र जसपाका एक जना गरी तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री तथा दुई जना राज्यमन्त्रीले सपथग्रहण गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गर्नेहरुमा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल र रघुवीर महासेठ छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।
जसपाका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री महतोसहित आठ जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्रीले सपथग्रहण गरेका छन् भने एमालेका शेरबहादुर तामाङले पनि सपथग्रहणसँगै स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्बाङले मात्रै निरन्तरता पाएका छन्।
सपथ लिने नयाँ मन्त्रीहरूः
शक्रबारको विस्तारपछि पनि गृहसहित केही मन्त्रालय अझै मन्त्री विहीन रहे । रामबहादुर थापा बादल पदमुक्त भएपछि खाली भएको गृहसँगै रक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् ।
हाललाई यी सबै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नेछन् ।